Aqoonkaab Habka aad u maareyn lahayd waqtigaaga bisha Ramadan | Aqoonkaab
Habka aad u maareyn lahayd waqtigaaga bisha Ramadan
Jun 14, 2015Arrimaha islaamka
waa muhiin inaad waqtigaaga nidaamiso bisha barakaysan ee ramadan. guud ahaan markaad arrin qabanayso waxa jira afar waxyaalood oo ay tahay inaad sii ogaato . 1. tamarta aad haysato 2. waqtiga kuu bannaan 3, mudnaanta 4. iyo howlaha dabiiciga ah . bisha ramadan guud ahaaan waxa kordha cibaadada dadka oo dhana waxay u tartamaan siday ugu dhawaan lahaayeen ilaahay iyaga oo la imanaya salaad iyo soon badan sidaasi daraadeed bisha ramadan gebi ahaan ba way ka duwan tahay bilaha kale .
inta badan ma heshid waqti aad shaqo ku qabatid gelinka dambe maxaa yeeley dadka oo dhami waxay u diyaar garoobayaan afurka sidoo kale ma haysatid tamar kugu filan oo aad shaqo ku qabatid ,sidaasi daraadeed waxa haboon inaad gelinka hore dhamaysatid howlahaaga shaqo oo idil .
sidaasi daraadeed waxaad u baahan tahay inaad barato habka aad u maareyn lahayd waqtigaaga si aad u gaadho u jeedooyinkaada maalinlaha ah.
habka aad u maareyn lahayd waqtigaaga bisha ramadaanka
suxooro oo cun cuno nafaqo siinaysa jidhkaaga si ay kuugu suuro gasho inaad cibaadada gudato sida quraan akhriska ,salaadaha iwn .
raga waxa u fadli badan inay aadaan masaajidka dumarkana waxa u fadli badan inay guryahooda ku tukadaan , inta badan suxuurta iyo salaada subax waxa u dhexeeya illaa 30 daqiiqo waxana kuu fadli badan inaad quraan akhrisato ama ducaysato waqtigaa .
Afur oo weliba afurada dedeji ka dib tuko oo cibaadayso
waxa aad u fadli badan inaad salaada taraawiixda ku tukato masaaajidka .
isku day inaad waqtigaaga u gaar yeeshid cibaadada alle toban ramadan ee dambe maxaa yeelay waa dariiqada ugu wanaagsan ee aad ilaahay ugu dhawaan lahayd .
mushkiladaha ugu badan ee dadka ka hor timaada bisha ramadan waa hurdada maxaa yeeley dadka badankooda ma xadidaan waqtiga hurdada. waxa haboon in aad qaadato waqti hurdo oo kugu filan illaa 8 saacadood .
xuquuqda :aqoonkaab .com
Previous Postfree download advanced system care ultimate 8 Next PostMobilada aduunka ugu xiisaha badan sanadkan 2015 iyo falanqeyntooda